Sineto Ike Ekweremmadu na-akpo ndi Nigeria oku
Osote onye isi oche Sineti ala Nigeria, Ike Ekweremadu, akpọkuona ndị Nigeria niile ka onye ọ bụna kwuo uche ya ugbu a ndị Sineti malitere ịtụgharị uche maka idegharị, ma ọ bụ ịhazi akwụkwọ iwu ala Nigeria.
Sineto Ekweremadu kpọrọ oku a site n’ozi onye ndụmọdụ ya, bụ mazị Uche Anichukwu. Mazị Anichukwu ziputere ozi ahụ n’ama saiba ndị otu kọmitị (ngalaba Sineti) na-ahụ maka ihazi na ịdegharị akwụkwọ iwu: www. constitutionreviewng.org.
Ndị kọmiti ahụ na-akpọ ndị ala Nigeria ka oke na ngwere zitere ha ozi, ma gwakwa ha ihe o chere maka otu a ga-esi degharịa iwu Nigeria ka o were dị mma. Ha weputere ajụjụ ole n’ole ndị mmadụ kwesịrị ịza n’akara ama saịba a: www.publicopinionnigeria.org